E စီးရီးစက်ရုံ - China E Series ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ဆုံလည်ကြိတ်ခွဲစက်, 3E ဒူးထောက်အမျိုးအစားကြိတ်စက် - ဆုံလည်ဆုံလည်ကြိတ်စက် - ခြေလှမ်းမြန်နှုန်း
အရွယ်အစား: 1500 * 1700 * 2150mm ဗိုင်းလိပ်တံခံနိုင်မှု: ဗိုင်းလိပ်နှင့်စားပွဲမှ 0.005mm Max.distance: 400mm Spindle Speed: 80-5440rpm အသားတင်အလေးချိန်: 1280kg အမည်: ဆုံလည်ကြိတ်စက် 1. အရည်အသွေးနိမ့်ပြီးစျေးနိမ့် ၂ ။ ဗိုင်းလိပ်တံသည်းခံစိတ်: 0.005mm.3 ။ စက်မှကြိတ်ခေါင်းသည် 3HP မော်တာကိုအသုံးပြုသည်။ China.5 အတွက်စုဝေးထိုင်ဝမ်အစိတ်အပိုင်းများ။ Treble swallowtail လမ်းလမ်းကို ၀ င်ရိုးတွင်သုံးထားသည်။ ထို့ကြောင့်အလွယ်တကူပြုပြင်နိုင်သည်။
သတ္တုလက်စွဲအားကြီးသောဒေါင်လိုက်စက်မှကြိတ်စက်အိမ်အသုံးအဆောင်များ ၁၇၅၀ ကီလိုဂရမ်
ဗိုင်းလိပ်တံစုစုပေါင်းမြန်နှုန်း - ၆၆-၄၅၃၀rpm လည်ပတ် - လက်စွဲဇယားအရွယ်အစား - ၁၂၇၀ * ၂၅၄ မီလီမီတာခရီးသွားခြင်း (X / Y / Z): ၉၀၀ * ၃၇၀ * ၃၆၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ - ၅ နာရီလည်ပတ်မှုအမျိုးအစား - အိမ်ထောင်စုသုံးပစ္စည်းများ - အိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်သတ္တုလက်စွဲစာအုပ်ဆုံလည်ကြိတ်စက် ၆၆-၄၅၃၀pm ။ 5EBProduct Details1 ။ Y နှင့် Z ဝင်ရိုးပေါ်တွင် Squareguideway သည်ကောင်းမွန်သောတင်းကျပ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ X ကိုဝင်ရိုး dovetail way.3 ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ပိုရေးရှင်း၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုခိုင်မာစေပြီးအင်ဂျင်ကိုခိုင်မာစေပြီးလှပစေသည်။ အဆိုပါစက်က c နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်မားသည် ...
1370mm စားပွဲတင်ဆုံလည်ကြိတ်စက်၊ အလိုအလျောက်မှိုပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်ဒေါင်လိုက်ဆုံလည်စက်
Spindle Quill ၏လှည့်လည်ခြင်း: ၁၂၇ မီလီမီတာအလှည့်အပြောင်း: ၈၀-၅၄၄၀ / (၁၆ ခွန်း) / ၆၀HZ ဇယားအရွယ်အစား: ၁၃၇၀ * ၃၀၅ * ၈၅ မီလီမီတာခရီးသွားခြင်း (X / Y / Z): ၇၂၀ * ၄၁၅ * ၃၈၅ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ: 5HP ထုတ်ယူခြင်းအမျိုးအစား - နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များမှိုများ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များအတွက်မှိုပြုပြင်ခြင်း 6Product အသေးစိတ်1အတွက် 5HP 1370mm စားပွဲဆုံလည်ကြိတ်စက်ကိုပြုပြင်ခြင်း။ Y နှင့် Z ဝင်ရိုးပေါ်တွင် Squareguideway သည်ကောင်းမွန်သောတင်းကျပ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ worktable မျက်နှာပြင်နှင့်3ဝင်ရိုးလမ်းညွှန်လမ်းခိုင်မာခြင်းနှင့်တိကျ ground.3 နေကြသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်နံရိုးအားဖြည့်ခြင်းကိုခံယူသည်။
4E ဒူးခေါင်းအမျိုးအစား Gear Head ကြိတ်စက် 1500 * 1700 * 2150mm အရွယ်အစား 1400kg အသားတင်အလေးချိန်
အရွယ်အစား: 1500 * 1700 * 2150mm ဗိုင်းလိပ်တံသည်းခံမှု: ဗိုင်းလိပ်နှင့်စားပွဲမှ 0.005mm Max.distance: 410mm Spindle အမြန်: 80-5440rpm အသားတင်အလေးချိန်: 1400kg အမည်: ဆုံလည်ကြိတ်စက် 4E ဒူးခေါင်း Gear Head Milling Machine 1500 * 1700 * 2150mm Dimension 1400kg အသားတင်အလေးချိန် ၁။ အရည်အသွေးနိမ့်ပြီးစျေးနိမ့်သည်။ ဗိုင်းလိပ်တံသည်းခံစိတ်: 0.005mm.3 ။ စက်မှကြိတ်ခေါင်းသည် 3HP မော်တာကိုအသုံးပြုသည်။ China.5 အတွက်စုဝေးထိုင်ဝမ်အစိတ်အပိုင်းများ။ Treble swallowtail လမ်းညွှန်နည်းလမ်းသည်ကလေးမွေးစားခြင်းဖြစ်သည်။
အိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် 1270 * 254mm Benchtop Mill Drill Machine R8 ဗိုင်းလိပ်တံကို Taper
စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၁၂၇၀ * ၂၅၄ * ၉၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ခရီးသွားခြင်း - ၉၀၀/၃၇၀ / ၃၆၀ မီလီမီတာအမြင့်အကွာအဝေးနှင့်ဗိုင်းနင့်အကြားကွာခြားချက် - ၄၀၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ၏သွားလာမှု - ၁၂၇ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း - ၈၀-၅၄၄၀rpm (၁၆ ဒီဂရီ) / 60HZ Spindle Taper: R8 (NT30) ဗိုင်းလိပ်တံ: 3HP ရှေ့သို့နှင့်နောက်သို့လှည့်သည့်ထောင့် - ± 45 °လက်ဝဲနှင့်ညာဘက် Tilt ထောင့် - ± 90 ° Dimension: 1500 * 1700 * 2150mm အသားတင်အလေးချိန်: 1500kgs X axis x deovetail way Y / Z ဝင်ရိုးစတုရန်းလမ်း 1270 * 254mm စားပွဲတင်ထိုင်ဝမ်အစိတ်အပိုင်းများခြေမြန်မြန် economiclal ကြိတ်စက် 4EB 1. သွားနှင့်အတူနိမ့်သောစျေးနှုန်း ...
နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များမှိုထုတ်ယူမှုအတွက် 0.005 ဗိုင်းလိပ်တံသည်းခံစိတ်ဒေါင်လိုက်ဆုံလည်ကြိတ်စက်
အခြေအနေ - ဗို့အားအသစ် - သုံးစွဲသူလိုအပ်ချက်စွမ်းအား - 5HP အရောင် - စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောဗိုင်းလိပ်တံသည်းခံမှု - 0.005 X / Y / Z ခရီးသွားခြင်း - 1000/385/340mm Spindle Taper: NT40 ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း - ၈၀-၅၄၄၀ / (၁၆ တန်း) 60HZ ဇယားအရွယ်အစား - 1370 * 280 * 90mm အာမခံချက် - ၁ နှစ်သက်တမ်း - ၁၆၀၀ * ၁၇၅၀ * ၂၂၀၀ မီလီမီတာအသားတင်အလေးချိန် - ၁၇၅၀ ကီလိုဂရမ်အနိမ့်သောဆုံလည်ကြိတ်ခွဲစက် - 5EA NT40 ဗိုင်းလိပ်တံကထိုင်ဝမ်အစိတ်အပိုင်းများမှကြိတ်ခွဲထားသောခေါင်းစဉ် ၁၃၇၀ * ၂၈၀ မီလီမီတာအလုပ်လုပ်သောစားပွဲခုံပြုပြင်ခြင်း ၁ ။ ၃။ ဗိုင်းလိပ်တံကိုထု ...
0.005mm သည်းခံမှုအလိုအလျောက်နှင့်အတူ ISO30 / R8 ဗိုင်းလိပ်တံဆုံလည်ကြိတ်စက်
Rated Power: ၂.၂kwkw ဗိုင်းလိပ်တံခံနိုင်မှု: ၀.၅၅ မီလီမီတာ MaxDistance မှဗိုင်းလိပ်နှင့်စားပွဲ - 400mm Spindle Speed: 80-5440rpm ဗိုင်းလိပ်တံ - R8 / ISO30 အမည် - ဆုံလည်ကြိတ်စက် ISO30 / R8 Spindle ဆုံလည်ကြိတ်စက် 3E 2.2kw ဗိုင်းလိပ်ပါဝါ 0.005mm ဗိုင်းလိပ်တံကိုခံနိုင်ရည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု: 1. အာမခံကာလအတွင်း၊ ဆုံလည်ကြိတ်စက်နှင့်တစ်ခုခုမှားယွင်းပါက၊ ဤပြproblemနာကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ရန်စီမံကိန်းအားပံ့ပိုးပေးရန်နှင့်ဖောက်သည်များအားပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်ကူညီပေးပါသည်။
ခိုင်ခံ့သောစက်မှုကြိတ်ခွဲစက် ၂.၂ KW ပါ ၀ င်သောသက်တမ်းကြာရှည်ခံမှုဖြင့် 1370 * 280mm
Rated Power: 2.2KW ဗိုင်းလိပ်တံခံနိုင်မှု: ၀.၅၅ မီလီမီတာ Spindle နှင့်ဇယားမှအဝေးခံ - ၄၆၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ - R8 / NT30 အမည် - ဆုံလည်ကြိတ်စက်စက်ဗျူဟာအမြန်နှုန်း - ၈၀-၅၄၄၀ (၁၆ ဂရန်း) / ၆၀HZ ၁၃၇၀ * ၂၈၈ မီလီမီတာ 3HP / R8 ထိုင်ဝမ်အစိတ်အပိုင်းများ Speed ​​Spindle ဆုံလည်စက်စက်ပစ္စည်းအသေးစိတ်1။ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ကမ္ဘာလုံးလည်ပတ်သောကြိတ်ခွဲစက်ကိုအိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများမှိုပြုပြင်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားပြီးအပြိုင်အဆိုင်များသောစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ အမြင့် ...
3HP / R8 (NT30) ထိုင်ဝမ်မှအရှိန်မြန်သောဒေါင်လိုက်ဆုံလည်ကြိတ်စက်၊ ၁၂၇၀ * ၂၅၄ မီလီမီတာစားပွဲ
Spindle စုစုပေါင်းမြန်နှုန်း - 80-5440rpm ပုံစံ - 4E စားပွဲတင်အရွယ် - 1270 * 254mm ခရီးသွားခြင်း (X / Y / Z): 900 * 395 * 340mm Spindle ပါဝါ - 3HP ဗိုင်းလိပ်တံသည်းခံနိုင်မှု - 0.005mm 3HP ထိုင်ဝမ်အစိတ်အပိုင်းများဒေါင်လိုက်ဆုံလည်စက်စက်များ 900 * 395 * 340mm ခရီးသွား 4E ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်1။ Dovetail လမ်းလမ်းကို X နှင့် Z ၀ င်ရိုးနှင့် square wayon Y axis.2 တို့တွင်အသုံးပြုသည်။ China.3 အတွက်စုဝေးထိုင်ဝမ်အစိတ်အပိုင်းများ။ ကော်ပိုရေးရှင်း၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုခိုင်မာစေပြီးအင်ဂျင်ကိုခိုင်မာစေပြီးလှပစေသည်။ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သောမှို ...
Dovetail Way XZ Axis ဖြင့် ၁၂၇၀ * ၂၅၄ မီလီမီတာမြင့်မားသော Rigidity ဆုံလည်စက်
Spindle စုစုပေါင်းမြန်နှုန်း - 80-5440rpm X နှင့် Z ဝင်ရိုး - Dovetail Way Table အရွယ်အစား - ၁၂၇၀ * ၂၅၄ * ၉၀ မီလီမီတာအမြင့်ဆုံး - ၀.၄ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံစွမ်းအား - ၃HP အမည် - ဆုံလည်ကြိတ်စက် ၁၂၇၀ * ၂၅၄ မီလီမီတာစားပွဲဆုံလည်စက် 4E X နှင့် Z Axis Dovetail WayProduct Details1 ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ကမ္ဘာလုံးဆုံလည်ကြိတ်ခွဲစက်ကိုအိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများမှိုပြုပြင်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိပျင်းစရာကောင်းသည်။